“Waxaannu xukuumadda uga digaynaa xukun milateri oo golayaashu xalaalayn.” Cirro | Berberanews.com
Home WARARKA “Waxaannu xukuumadda uga digaynaa xukun milateri oo golayaashu xalaalayn.” Cirro
“Waxaannu xukuumadda uga digaynaa xukun milateri oo golayaashu xalaalayn.” Cirro
Hargeysa(Berberanews):- Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa Xukuumadda Madaxweyne Biixi uga digay inay isku daydo inay dalka ku maamuusho xukun Millateri iyo xaalado deg-deg ah, waxaanu bogaadiyey labada gole baarlamaan oo aqlabiyad ku diiday fadhi wada jir ah oo ay maanta yeesheen ansixinta xaalad degdeg ah oo Madaxweynuhu ku soo rogay deegaanno ka tirsan gobolka Sanaag.
Waxa uu Guddoomiye Cirro oo shir jaraa’id maanta ku qabtay xarunta xisbigaas ee Hargeysa, sidoo kale digniin u diray xukuumadda iyo laamaha amniga oo uu sheegay inay waxay golayaashu diideen dhaqan-geliyaan, isagoo sidaa ku sheegay Saxaafadeed uu ku qabtay Hoyga uu ka degan yahay magaaladda Hargeysa.
“Waxaan warbaahinta u hor imi in aan Boggaadiyo Baarlamaanka Somaliland labadiisa aqalba Golaha Guurtida iyo Golaha Wakiillada oo maanta qaatay tallaabo taariikhiya , tallaabadaas oo ah inay diideen inay ansixiyaan maanta xukunkii milateri ama xukunkii deg deg ahaa ee lagu soo rogay gobolka Sanaag, baarlamaanka waxaan ku boggaadinayaa in tallaabadaasi ay ahayd mid ay sharciyada ugu hiiliyeen mid ay shacbiga ugu hiiliyeen.” sidaa ayuu yidhi Cabdiraxmaan-Cirro.
Cirro oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaas ku ladhay; “Waxaannu shacabku xasuus-naan doonnaa tallaabadda taariikhigga ah ee aad qaadeen, waxaad u hiiliseen dhammaan shacabka reer Somaliland, waayo xukunka degdeg ahi kuma koobnaadeen gobolka Sanaag oo goboladda kale ayaa ku xigi lahaa oo Awdal baa ku xigi lahayd. Marka maanta shacabka aad la dareen noqoteen waan idinku boggaadinayaa, Waxaad u hiiliseen dhammaanba dadkii ku noola gobolka Sanaag ee degmooyinkiisa lagu soo rogayay xukunka milateri ee kala ahaa, Gar-adag, Ceel-afweyn iyo Ceerigaabo.” ayuu yidhi Cirro.
Guddoomiye Cirro, ayaa Xukumadda Madaxweyne Biixi uga digay inay xukun Millateri oo aanay xaalaalayn golayaasha Guurtida iyo Wakiilladu inay dul dhigto shacbiga, waxaanu yidhi; “Waxaannu xukuumadda uga digaynaa xukun milateri oo golayaashu xalaalayn oon sharci ahayn inay shacabka ku fuliso, waxaan kale oo shacabka reer Somaliland gobolkasta oo ay joognaa ugu baaqayna in ay ilaashaddan xasiloonidooda iyo nabadgel-yadoodda. Ciidamadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaannu ugu baaqaynaa inay sharciga u hoggaansamaan inay shacabkoodda u tudhaan iyo inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo xasiloonni-darro iyo amni-darro ka dhalin karta dalka.”
Muuqaalkan Hoose ka daawo Shirka Jaraa’id ee Guddoomiyaha Waddani Cabdiraxmaan-Cirro arrimahaas kaga hadlay:-
Previous articleDaawo Beelihii ku diriray Ceel-afweyn oo mag loo kala qaaday
Next articleWasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Somaliland oo furtay nidaam cusub oo lagula socon doono gaadiidka